Obama achiri kutadza kushandisa iPhone kunyangwe vanachipangamazano vake vatogona | IPhone nhau
Obama achiri haakwanise kushandisa iPhone kunyangwe vanachipangamazano vake vanogona izvozvi
Kunyange mutungamiri wenyika ine simba kwazvo pasi rose achiramba achimanikidzwa kushandisa Blackberry zuva nezuva, zvinoita sekunge vanachipangamazano vake vatotiza kutambudzwa uku uye sekureva kwe NY Times, vanachipangamazano avo vari kushanda pari zvino paCasa White Ivo vakakwanisa kushandura yavo yekare uye yakasarudzika Blackberry yezvigadzirwa izvo Apple zvinogadzira.
Idzi shanduko dzinokonzerwa nekuvandudzwa kweiyo White House mushandi mutemo pane tekinoroji. Ehe, Barack Obama's Blackberry haisi Blackberry iyo yatinogona kuwana mumusika, asi asi iyo yakasarudzika modhi ine yakakwira nhanho dzekuchengetedza zvese mukutaurirana kwezwi senge izvo zvakaitwa kuburikidza neemail kana mameseji.
Obama chete wakasununguka kushandisa iPad ine Wi-Fi kubatana, hapana chimwe. Parizvino uye kusvikira aramba ari mutungamiriri weUnited States, achafanirwa kuramba achishandisa maCanadaberry eBlackberry.
Sezvo isu tichigona kuverenga mu NY Times.
Munguva pfupi yapfuura, vanachipangamazano kumadokero kweWhite House vaive vaneta nekushanda pamwe neinenge tekinoroji isingachashandi: makomputa kubva kumakore gumi apfuura, maprinta madema nechena asingatenderi kudhinda mativi ese, uyezve vachishandisa Blackberry kutaura nezwi ( zvishandiso zvine hurombo hwekugamuchira Wi-Fi) pamwe nematafura ematafura asina chero kufambira mberi kunopihwa nhare dzekumba parizvino.
Asi nhasi, vazhinji vevanopa mazano veWhite House vari kushandisa iyo iPhone, nepo Mutungamiriri weUnited States achiri akasungwa nengetani kune Blackberry yakanyatsogadzirirwa iye.
Zvichida, kugadziriswa kwaBarack Obama's Blackberry kunosanganisira mameseji sisitimu, sezvo CEO wekambani yeCanada akataura kuti yavo mameseji system yakakwana uye 100% yakachengeteka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » Obama achiri haakwanise kushandisa iPhone kunyangwe vanachipangamazano vake vanogona izvozvi
Iyo mameseji system amai vako, huya. Damn Blackberry. Hazvife zvakare.
Hahahaha murombo Mr. President vachishandisa iyo blackcutrerry !! Wakanyarara munguva pfupi iwe uchave uri muzana ramakumi maviri nemakumi maviri uchishandisa iphone ine simba
sisis ... allli anga ave nemakore hahahahajajjaajaja !!! shandisa iko kunakidzwa, handei.
iyo yakachengeteka system ndeyeiyo yeBB kana uchizvida kana kwete!
Sisisisi yakachengeteka kwazvo ... Zvirokwazvo hapana munhu anoishandisa hahahaha
Ndiko here kuti iwe unokanganwa blackgate? Mavhiki maviri maseva pasi uye mahunyanzvi achiudza zvese zvakanyatso kubikwa mukati mu blacktruño !! Chokwadi kwazvo, saka shuwa kuti VaVaita imwe "yakakosha". Ini ndinoti, kana vakachengeteka zvakadaro, sei usingashandisi yakajairika sevamwe? Zasca !!
Vanhu vanomhanya pasi vanoshandisa BlackBerry
Pindura kuna san
Runyerekupe zvakare Apple Tarisa muna Chikumi? Hongu, uye inogona kunge iri 40% yakatetepa
Reddit Inosunungura Yepamutemo iOS App (iPhone Chete)